Ogaden News Agency (ONA) – Xafladii Bishuft oo Maanta Furmaysa & Xasuuq Laga Cabsi Qabo
Xafladii Bishuft oo Maanta Furmaysa & Xasuuq Laga Cabsi Qabo
Posted by Dulmane	/ October 1, 2017
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Bishuft ee Gobolka Oromia ayaa sheegaya in maanta oo Axad ah ay kaqabsoomi doonto xaflad dhaqameedkii caanka ahaa ee qoomiyada Oromadu ay qaban jirtay sanadkasta kowda bisha October.
Sida lawada xasuusan yahay ciidamada bahalka ah ee wayaanaha ayaa sanadkii lasoo dhaafay magaalada Bishufti ku xasuuqay in kabadan kun qof oo shacab ah oo kamid ahaa dadkii xaflada kasoo qayb galay waxayna ciidanka wayaanuhu dadkaas u xasuuqeen si ula kac ah.
Hadaba hay’adaha xuquuqul insaanka iyo wax garad aad ubadan ayaa sheegay in ay cabsi wayn kaqabaan in uu dhaco xasuuq lamid ah midkii sanadkii hore kadhacay magaalada Bishuft, waxayna xukuumada wayaanaha uga digeen in ay gaysato xasuuq.
Dhalinta udhalatay Gobolka Oromia ayaa sheegay in aysan udul qaadan doonin hadii ay xaflada yimaadaan mas’uuliyiin katirsan xukuumada wayaanaha iyo ciidamada wayaanaha toona, waxayna dhalintu sheegeen in weerar kuqaadi doonaan cidii ay ishoodu qabato wax wayaanaha kasocda oo xaflada yimaada.
Dhinaca kale saraakiisha wayaanaha ayaa wax garadka Qoomiyada Oromada kacodsaday in ay dhalinta qabtaan, waxayna saraakiishu sheegeen in ay doonayaan in aysan xaflada imaanin cid kamid ah kacdoon wadayaasha Oromada isla markaana aysan xaflada imaanin cid xidhan dharka madoow ee baroor diiqda loosoo qaato.
Odayaasha qoomiyada Oromada ayaa dhankooda taliska wayaanaha kacodsaday in aysan goobta xafladu kasocoto keenin wax ciidan ah, waxayna odayaashu sheegeen in ay iyagu balan qaadayaan amaanka xaflada.
Hadaladan iska soo horjeeda ee kasoo yeedhay dhalinta Oromia, Taliska wayaanaha iyo odayaasha qoomiyada Oromada ayaa laga cabsi qabaa in ay horseedaan qalalaase kabilowday xaflad dhaqameedka maanta lafilayo in ay kafurantu magaalada Bishuft ee Gobolka Oromia.
Wixii kasoo kordha xaflada Bishuft iyo siday kudhamaato kala soco ONA.